Bursa İMO Madaxweynaha Mehmet Albayrak T2 Mashruucu Waa Inuu Jiro Subway | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaMashruuca Isgoyska Banaadir Mehmet Albayrak Mashruuca T2 waa inuu ahaadaa Metres
29 / 12 / 2018 16 Bursa, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Gobolka Marmara, Metro, TURKEY, taraamka
Bursa imo madaxweynaha mehmet albayrak mashruuc t2 waa inuu ahaadaa metro
Rugta Bursa ee Injineerada madaniga ah Gudoomiyaha Bursa Laanta (IMO) Mehmet Albayrak ayaa ku dooday in gaadiidka magaalada loo qorsheeyay si qaldan.
Mid ka mid ah dhibaatooyinka muhiimka ah ee Bursa ayaa sugaya xal u muujinaya gaadiidka gudaha iyo dibedda ee magaalada Madaxweynaha Albayrak ayaa yidhi kuwan soo socda ee ku saabsan barta xalka:
Esas Ujeedadeenna ugu weyn waa in aan abuurno oo aan shaqeyno nidaam gaadiid isku dhafan oo mudnaanta siinaysa gaadiidka dadka, ee aan ahayn gawaarida, oo ka jawaabaya baahiyaha rakaabka. Dawlada Hoose ee Magaalada Bursa waxay diyaarineysaa Dib u eegida Qorshaha Gaadiidka waxaana la wadaagi doonaa dadweynaha kadib sanadka cusub. Iyada oo qayb ka ah masuuliyadeena, waxaan helnay baaritaano badan iyo talooyin ku saabsan gaadiidka. IMO Bursa Laanta waa urur xirfad leh oo leh xubno badan oo khibrad u leh dhibaatooyinka magaaladan haysta oo leh qalab farsamo oo gaadiid ku socda. Si kastaba ha noqotee, nasiib darrose, uma wadaagi karaan macluumaad ku filan maamullada maxalliga ah ee ku saabsan dhibaatooyinka magaalooyinka. Ka faa’iideysiga aqoonta iyo waaya-aragnimada qolalka tacliinta waxay faa iido u tahay dawladaha hoose iyo magaaladeena. Annagu xaq uma lihin inay Ruggeenna iyo Golaha laxiriira tacliinta laxiriirto, oo soosaaray go'aano iyo talooyin muhiim ah ilaa iyo hada, kama mid aha diyaarsanayaasha qorshaha halka gaadiidkii Bursa dib loo eegay oo xalka xididdada la geliyay qorshaha. Horumarinta qorsheysan ee gaadiidka dadweynaha waa lagama maarmaan in la sameeyo gaadiidka ergonomic iyo dhaqaale ahaan. Si kastaba ha noqotee, magaaladeena, Nidaamka Tareenka Fudud looma adeegsan karo si hufan marka loo eego cilladaha qorshaynta iyo isbedelada la sameeyay. Waxaa ku xigta, dhammaan dadaalada lagu kordhinayo wax qabadkooda waxay sii wadaan in ay keenaan kharashyo dheeri ah miisaaniyadda Dawladda Hoose. Ugu dambeyntii 9.5 milyan Euro oo ku saabsan nidaamka calaamadayntaqabanqaabada waxaa lagu sameyn doonaa iyadoo la bixinayo qiime. Adeegga aan ka helno bixinta qiimaha noocan oo kale ah miyaa loo isticmaali doonaa si hufan? Suuragal ma noqon doontaa in la yareeyo waqtiga u dhexeeya min daqiiqadaha 5 illaa daqiiqadaha 2,5 iyada oo la adeegsanayo nidaamka? In kasta oo dhammaan digniinahayagu si xun u wajaheen, Kent Squarelaga bilaabo TerminalKhadadka T2 ayaa loo dhisay; talooyin badan oo cusub ayaa loo soo jeediyey inay noqdaan kuwo hufan. Si looga hortago dhibaato cusub mustaqbalka magaalada ama keenin culeys dhaqaale oo cusub, diyaarinno lama huraan ah waa in la sameeyaa inta jidku dhow yahay. Khadka T2waa go'aanka ugu saxsan uguna faa'iidada badan. ”
Mudane Albayrak wuxuu hoosta ka xariiqay in xariiqu uu noqon karo qaab lagu qaado dad aad u tiro badan iyadoo la tixgalinayo TÜYAP Fairground, the Palace of Justice, Terminal, DOSAB, Ovaakça Neighborhood iyo hormarinta degmada Fair Fair.
TX Xariiqda 'T2' waxay horey u ahaan laheyd hurdo madaama basaska, basaska, gawaarida adeega iyo gawaarida ay ku socdaan isla isla. Fagaaraha MagaaladaKhad wanaagsan oo wax ku ool ah ayaa la heli doonaa iyada oo dib loo habeeyo saldhigga HRS oo laga dhigo mid ku xiran HRS isla markaana la yareeyo idaacadaha khadka ku jira iyada oo la adeegsanayo dib-u-habayn. Taraammada la soo saaray oo lagu iibsaday xaruntan ayaa dib loo habeyn karaa si loogu isticmaalo inta u dhexeysa Görükle iyo Jaamacadda. Garoonka kadib Cali Cusmaan Sonmez State HospitalMarkuu dhismuhu dhammaado; Dhammaantiin way idiin wada caddahay in ciriiriga taraafikada ee baabuurtu ay aad uga sii badnaan doonaan xaaladda maanta jirta. Waxaan sidoo kale sugeynaa inaan aragno waxa uu xalka u noqon doono Novices ku jira Dib-u-eegida Qorshaha. Waxaan rajeyneynaa madaama aan nahay hay’adda IMO Bursa Laanta, inaan tixgalinay xalka aan horay u soo bandhignay. Waxaan dhibaato ku qabnaa dhaqaalaha dalka; Maalmahan markaan isku dayno inaanu ku ganacsano miisaaniyad xaddidan, miisaaniyadaha degmooyinkeenna wali shaki kama galaan maalgashiga cusub. Sidaa darteed, BursaAhmiyadaha mudnaanta leh waa in si wanaagsan loo meeleeyaa. Waa muhiim in mudnaanta la siiyo dhameystirka maalgashiga hoosta ku qoran halkii laga sameyn lahaa maalgashiyo badan oo aan dhamaanin. 1Muhiimadda koowaad waa inay noqotaa dhammaystirka Acem oo dhan, iyadoo la tixgelinayo garoonka iyo Cali Cusmaan Sonmez State Hospital. 2Muhiimadda koowaad waa in loo rogo Khadka T2 loona beddelo Nidaamka Tareenka Fudud oo loo habeeyo saldhigyada si ku habboon. 3Muhiimadda koowaad waa inay ahaato qawaaniinta iyo is-dhexgalka gadiidka Isbitaalka Magaalada. Waa la arki doonaa in dhibaatooyinka magaaladu ay sii yaraan doonaan haddii qorshaynta saxda ah lagu sameeyo waqtigii loogu talo galay halkii ay dhibaatooyin mustaqbalka ku dhici lahaayeen. ”
Guddoomiyaha UDEM-Haksen Peker: "Mushaharka Ugu Yar ee 2350 waa inuu noqdaa" TL "
Madaxweynaha Federaalka ee Erol Mehmet Yarar ee Ardahan
Waxaa jiri doona khidmadda albaabka laga galo Xarunta Magaalada Bursa iyadoo la raacayo baabuur
Bursa waa inay noqotaa magaalo la heli karo
Madaxa Laanta IMMO Bursa Necati Sahin: Waxaa la qorsheeyay in lagu qabto Bursa…
Jarjar dhaadheer magaalada T-2 khadka taraamka